နှစ်သစ်ကူးအတွက် တောင်ကိုရီးယား သမ္မတဆီမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင် ဆေ? - Yangon Media Group
နှစ်သစ်ကူးအတွက် တောင်ကိုရီးယား သမ္မတဆီမှ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့ Girls’ Generation အဖွဲ့ဝင် ဆေ?
ဆောယောင်းသည် မြောက်ကိုရီးယားဂီတအဖွဲ့တစ်ခုနှင့်အတူ မကြာသေးမီက ဖျော်ဖြေမှု ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် ဖုန်းခေါ်ရန် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ဆောယောင်းနှင့် ဖုန်းပြောဆိုမှုအတွင်း သမ္မတမွန်းသည် ဖျော်ဖြေပွဲနှင့်ပတ်သက်၍ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ ၄င်းက “တောင်နဲ့ မြောက်ကိုရီးယားတို့ လက်ချင်းတွဲပြီး ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းဟာ တကမ္ဘာလုံးကို ထိရှခံစားခဲ့ရစေပါတယ်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆောယောင်းကလည်း “သမိုင်းဝင်အခိုက်အတန့်မှာ ပါဝင်နိုင်ခဲ့သည့်အတွက် ဝမ်းမြောက်မိကြောင်း” တုန့်ပြန် ပြောဆိုခဲ့သည်။ ဆောယောင်း၏ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့် အိမ်ပြာတော်မှ ညွှန်ကြားရေးမှူးတို့ကလည်း မြောက်ကိုရီးယား ဂီတအဖွဲ့နှင့်အတူ ရုတ်တရက်ဖျော်ဖြေဖြစ်ခဲ့ပုံကို ပြောကြားခဲ့သည်။ အိမ်ပြာတော်ကသီချင်းနှစ်ပုဒ် ဖျော်ဖြေေးရန် တောင်းဆိုခဲ့ရာတွင် ဆောယောင်းက ဖျော်ဖြေပွဲမတိုင်မီ တစ်ရက်အလိုတွင် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို လေ့လာကျက်မှတ်ခဲ့သည်။ သို့သော် အစမ်းလေ့ကျင့်မှုမလုပ်ခဲ့ဘဲ ဖျော်ဖြေခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။